इन्टरनेट स्पीड टेस्ट के हो?
एक इन्टरनेट गति परीक्षण सर्भरबाट सानो फाइल पठाउन ब्रान्डब्यान्ड जडान मापदण्डहरू विश्लेषण गर्न र यो डाउनलोड गर्न लगाउँदा समय र त्यसपछि फाइललाई फिर्ता सर्भरमा अपलोड गर्न को लागी प्रक्रिया हो। मार्गको साथमा, ज्याटर र प्याकेट हानि जस्तै प्यारामिटरहरू पनि गणना गर्न सकिन्छ। केहि गति परीक्षण होस्ट पनि पिंग को उपाय गर्दछ, जो एक संदेश को लागि एक प्रेषक देखि आफ्नो गोल र गंतव्य को लागि समय हो, एक इंटरनेट नियंत्रण संदेश प्रोटोकॉल (ICMP) भेजने को लागि होस्ट अनुरोध पैकेट पठाउन को लागि।
सर्वोत्तम गति परीक्षण विश्वभर धेरै मेजबान सर्भरहरू छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न स्थानहरूमा इन्टरनेट गतिको परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ। यो सर्भरसँग वेबसाइटको वेब सर्भर वा वेब अनुप्रयोगको नजिक छ सर्भरको साथमा परीक्षण गर्न उत्तम छ; अन्यथा, रिपोर्ट गतिले प्रयोगकर्ताको वास्तविक कार्य गतिलाई प्रतिबिंबित गर्दैन।
पिंग के हो?
पिंग तपाईंको कनेक्शनको प्रतिक्रिया समय हो – तपाईले अनुरोध पठाउनुभए पछि कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुन्छ? छिटो पिंग भनेको अधिक उत्तरदायी जडान हो, विशेष गरी अनुप्रयोगहरूमा जहाँ समय सबै चीज हो (जस्तै भिडियो खेलहरू)। पिंग मिलिसेकेन्ड (एमएस) मा मापन गरिएको छ।
डाउनलोड गति के हो?
डाउनलोड गति यो छ कि तपाईंले कसरी सर्भरबाट डेटा खिच्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जडानहरू प्राय: डाउनलोड भन्दा बढि डाउनलोड गर्नका लागि डिज़ाइन गरिएको छ किनभने, प्राय: अनलाईन गतिविधिहरू, वेब पृष्ठहरू लोड हुँदै वा स्ट्रिमिङ भिडियोहरू लोड गर्दा, डाउनलोडहरू समावेश छन्। डाउनलोड गति माईब्याट्स प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) मा मापन गरिएको छ।
अपलोड गति के हो?
अपलोड गति यो छ कि तपाई कतिपय डेटा तपाइँलाई अरूलाई डेटा पठाउनुहुन्छ। अपलोड गरेर ईमेलहरू मार्फत ठूला फाईलहरू पठाउन आवश्यक छ वा भिडियो-च्याट प्रयोग गरी कसैलाई अनलाइनमा कुरा गर्नका लागि आवश्यक छ (किनकि तपाइँले तपाइँको भिडियो फिड पठाउनु पर्छ)। अपलोड गति प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) मेगाबिट मा मापन गरिएको छ।